Xinxiang Yuanhang Teaching Qalabka Co., Ltd diiradda saarayaa tayada wax soo saarka, si adag gacanta ku kharashka soo saarka, oo ka dhigaysa macaamiisha ku qanacsan. Ujeeddadeennu waa in la sii wado wada shaqaynta dhow la leh macaamiisha mustaqbalka fog. Hoggaansanaayeen ee "ruuxa sharafta maamulka humanized, baadi-goobka heer sare ah", "baan dadka no, waxaan hibo, dadka hibada u bedelaa", si ay u bixiyaan adeegyada ugu fiican oo tayo leh macaamiisha! Waxaan rajeynaynaa in aan comments qiimo leh iyo talooyinka uga yimaada saaxiib kasta, gacanta ee gacanta macaamiisha cusub iyo wax duug ah iyo in la abuuro mustaqbal wanaagsan! Qaado amar gudaha iyo dibaddaba, soo dhaweyn sawiro habka iyo baarka! Ku soo dhawoow inaad soo warsatid xaajooto!
Yuanhang Teaching Qalabka ayaa helay waayo-aragnimo qani ah oo duurka ku ah oo tuban noolaha iyo qalabka kale ee shaybaarka iyo wax soo saarka qalabka iyo iibka, iyo xoogga farsamo oo xoog leh iyo awoodaha horumarinta wax soo saarka xoog leh. Waxaa si weyn loo codsatay in baridda tijaabo ah in Hay'adaha waxbarashada sare iyo dugsiyada hoose iyo sare ee guriga iyo dibadda, sida beeraha, kaymaha, xannaanada xoolaha, daawo, dugsiyada caadiga ah, hay'adaha cilmi-baarista sayniska, iwm, taas oo ku lug leh beeraha kala duwan ee waxbarasho.
Product: tijaabooyinka cqaadir, xayawaanka iyo dhirta soo xareeyaan, xayawaanka iyo dhirta soo xareeyaan, organic wax gundhig tijaabooyinka (tijaabooyinka crystal), model (model caafimaad tijaabo waxbaridda, model barayay), cudurada aadanaha, histology iyo embryology, parasitology, daawo, ayidhi, calaamad ah cudurada dhirta, cilmi barasho xayawaan iyo cilmi barasho dhir slide microscope fasalka, muunada jidh, tijaabooyinka, jidh, tijaabooyinka, plastication of qalad kasta, model anatomy, tijaabooyinka, kabka vascular iyo alaabooyinka kale ee.
Engineering: dhismaha shaybaar physics lagmamaarmaanna, dhismaha baahinta campus, iyo dhismaha fasallada multimedia.
herbarium waxaa ka mid ah: hall muunada ururinta, daawooyinka hall ururinta xareeyo, caleen hall ururinta xareeyo, biorecorve Museum, xoolaha museum soo xareeyo, herbarium, xoolaha iyo hall ururinta muunada dhirta, metelay museum muunada dhawrista, park dhawrista, beerta dhalay, herbarium, qolka taariikhiga ah, qolka juquraafi, iwm
wax soo saarka Professional: tijaabooyinka, tijaabooyinka, bahal, tijaabooyinka, bahal ah, qaybaha histological, plasticizing soo xareeyaan, chips bio, tijaabooyinka, lafaha, dulin cad, cad microbial, xaleef daawo Chinese, xaleef dhirta, bogagga microscope, qaybaha cqaadir, tijaabooyinka, bahal ah iyo bahal, tijaabooyinka, tijaabooyinka, noolaha, dhirta qaybta cudurada, cudurada dhirta, cudurada xoolaha, biopsy cudurada aadanaha, slide microscope noolaha, qaybta xoolaha, histology xoolaha, load noole, load microbial, smear microbial, qaybta waxbaridda daawo Chinese, qaybta caafimaadka, qaybaha wax ku barayay, tijaabooyinka guud, tijaabooyinka, tijaabooyinka, tijaabooyinka, kabka, tijaabooyinka, dhirta laminating, tijaabooyinka, siibi, tijaabooyinka, jidh, tijaabooyinka, qeybaha, tijaabooyinka, cayayaanka, tijaabooyinka, xoolaha, tijaabooyinka, isku duro, dhicin, tijaabooyinka la qalajiyey, embriyaha, tijaabada, tijaabada, qaybta biology, histology iyo Embryology jaray jeex, botanical qaybta, muunada taariikhda nolosha, qaybta botanical, caafimaad qaybta parasitology, qaybta microbiological, muunada noolaha, muunada noole, microscope noolaha, microscope, koob ah sumalka uguma, muraayadaha indhaha, tijaabada dhalada, suxuunta Petri, Saacii, iyo galaas kiimikada.